Okwedlule：Yini ngempela ukwazi uNkulunkulu? Ingabe ukuqonda ulwazi lweBhayibheli nesayensi yezindaba zenkolo kungathathwa njengokwazi uNkulunkulu?
Okulandelayo：Yikumaphi amaphuzu lapho Amandla nokuhlakanipha kukaNkulunkulu kwambulwa khona?
3. Ukuchaza uNkulunkulu oyedwa weqiniso “njengoNkulunkulu Wobuthathu” kungukudelela nokuhlambalaza uNkulunkulu Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Niyazi…
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “ngakho uzoba ngcwele, ngoba Mina ngingcwele” (uLevitikusi 11:45). “nobungcwele, ngaphandle kwakho akekho umuntu oyobo…